Puntland Oo Walaac Ka Muujisay Markale Shirka Farmaajo Uu Ku Baaqay – Goobjoog News
Maamulka Puntland ayaa war ka soo saaray shirka uu Markale Farmaajo ku baaqay in magaalada Muqdisho ay isugu yimaadaan madaxda dowlad gobaleedyada dalka ,DF iyo Maamulka Gobalka Benadir .
Puntland ayaa sheegtay in ay ka walaacsantahay qoraallada iyo go’aanada uu qaadanayo madaxweeynaha Waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Xukuumadda Garowe ayaa waxa ay sidoo kale ku baaqday in shirka lagu qabto Garoonka Diyaaradaha magaalada Muqdisho ammaankiisana ay sugaan AMISOM iyo Beesha Caalamka.
Xafiiska Madaxtooyada Puntland ayaa qoraalka kasoo baxay lagu sheegay in loo bahan yahay in waqti lasiiyo wada hadalada u socdo Rooble iyo Musharixiinta .
Hoos Ka Akhriso Qoraalka Puntland